Kugadziriswa kunouya nemutengo. Uber iri kukanganisa indasitiri yetekisi. Internet redhiyo iri kukanganisa nhepfenyuro nemumhanzi pane zvechivanhu nhepfenyuro. Pa-kudiwa vhidhiyo iri kukanganisa echinyakare mafirimu. Asi izvo zvatiri kuona hazvisi chinja yekudiwa, ndizvo kudiwa kutsva.
Ini ndinogara ndichiudza vanhu kuti zviri kuitika haisi imwe indasitiri kuuraya imwe, zvinongova kuti maindasitiri echinyakare aive akachengeteka mumiganhu yavo yemubhadharo uye achizviuraya zvishoma nezvishoma Iko kufonera kune chero yechinyakare kambani iyo yavanofanirwa kuisa mari muhunyanzvi hutsva kana ivo vakatarisira kusazomhanyiswa pakupedzisira.